प्रदेशमा किन गए केन्द्रका भेट्रान सहसचिवहरू ?
शिव सत्याल काठमाडौं, २२ भदौ
प्रदेश सरकारले अनुभवी सचिव नपाएको गुनासो गरिरहेका बेला केन्द्र सरकार मातहत रहेका पुराना, अनुभवी तथा प्रभावकारी विभाग र निकायको नेतृत्व गरिरहेका सहसचिवहरू एकाएक प्रदेश सरकारको सचिव बनेर गए ।
केन्द्र सरकारको सहसचिव प्रदेशमा जाँदा सचिव बनाइने व्यवस्थाअनुसार उनीहरू सचिव बनेका हुन् । सरकारले केन्द्रका कर्मचारी प्रदेश वा स्थानीय तहमा जाँदा एक तथा माथिल्लो पदको सेवा सुविधा दिने नीतिगत व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअनुसार उनीहरू सचिव बनेका हुन् ।
केन्द्र सरकारको प्रभावशाली विभाग मानिने आन्तरिक राजस्व विभाग र भन्सार विभागका महानिर्देशक प्रदेश सचिव भएर गएका छन् ।
यस्तै, नेपालको आधिकारिक तथ्यांक संकलन गर्न अनुमति दिने, तथ्यांक राख्ने र त्यसको नियमन गर्ने अधिकार पाएको तथ्यांक विभागको महानिर्देशक पनि प्रदेश सचिव भएर गएका छन् ।
किन तयार भए सहसचिवहरू ?
यसअघि प्रदेश सचिव बनाएर पठाइएका अधिकांश सहसचिवहरू केन्द्र सरकारका कनिष्ठ सहसचिवहरू थिए । उनीहरूबाट प्रभावकारी समन्वय र काम नभएको गुनासो प्रदेश सरकारले गर्दै आएका थिए ।
प्रदेश सरकारले केन्द्रका वरिष्ठ सहसचिव खोज्ने र केन्द्रले वरिष्ठ सहसचिवलाई प्रदेश पठाउन नसक्ने अवस्था आएपछि एक प्रकारको अन्योल थियो । त्यही अन्योलबीच संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले नयाँ जुक्ति निकाल्यो । र, प्रदेश सरकारको सचिव नभएको व्यक्ति केन्द्र सरकारको सचिव हुन नपाउने गरी नीतिगत व्यवस्था गर्ने छलफल अघि बढ्यो ।
प्रदेशको सचिव नभई केन्द्रको सचिव बन्न नपाउने नीतिगत व्यवस्था लागू हुने संकेत पाएपछि केन्द्रको सचिव हुने लाइनमा रहेको अधिकांश सहसचिव प्रदेश गएका हुन् ।
सम्भावित प्रमोसनको म्याद ६ महिनासम्म मात्रै रहेको र ६ महिनाभित्र अनिवार्य अवकाश पाउनेबाहेकका सबै सहसचिवलाई प्रदेशमा पठाइएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले जानकारी दिए ।
‘केन्द्र सरकारको सचिव हुन प्रदेश सरकारको सचिव भएर काम गरेको अनुभव हुनैपर्ने र दुर्गम क्षेत्रमा काम गरेको पनि हुनैपर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्न लागेका छौं, यो विषयमा छलफल चलिरहेको छ, त्यसैका आधारमा केन्द्र सरकारको सचिव हुने लाइनमा रहेका सबै सहसचिवहरू प्रदेश मन्त्रालयको सचिव बनाइएको हो,’ मन्त्री पण्डितले शिलापत्रसँग भने ।
को–को गए ?
प्रदेश १ मा रेग्मी
दामोदर रेग्मी सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन तालीम केन्द्रको प्रमुख थिए । उनी नेपाल सरकारको वरिष्ठ सहसचिव अर्थात् सचिव बन्ने लाइनमा रहेका सहसचिव हुन् ।
रेग्मी प्रदेश १ को आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको सचिव भएका छन् । उनी नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालय र वाणिज्य मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायहरूमा लामो समय काम गरेका अनुभवी सहसचिव मानिन्छन् ।
रेग्मीले राष्ट्रिय योजना आयोगमा समेत काम गरेका छन् । संघीय अर्थ प्रणाली र नेपालको कर सुधारमा कलम चलाइरहने उनीसँग संघीय अर्थ मन्त्रालयका सबै विभागहरूको अनुभव छ ।
प्रदेश २ मा श्रेष्ठ र पुष्कर
केन्द्र सरकारले प्रदेश २ को आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको सचिव बनाएर कृष्णहरि पुष्करलाई पठाएको छ । उनी अख्तियार दुरुपयोग अनुुसन्धान आयोगको प्रवक्तासमेत बनिसकेका प्रभावशाली सहसचिव हुन् ।
यस्तै, प्रदेश २ को आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको सचिवमा प्रेमकुमार श्रेष्ठलाई पठाइएको छ । श्रेष्ठसँग अर्थ मन्त्रालय र मातहत निकायमा काम गरेको खासै अनुभव नरहेको बताइन्छ । श्रेष्ठसँग केन्द्र सरकारमातहतका कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, संचार मन्त्रालय, बेपत्ता छानबिन आयोगलगायतका निकायहरूमा काम गरेको अनुभव छ ।
प्रदेश ३ मा पौडेल
केन्द्र सरकारको राजस्व प्रशासनमा लामो समय बिताएका मुकुन्द पौडेललाई प्रदेश ३ को आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको सचिव बनाइएको छ ।
पौडेलले अर्थनीति विषयमा विद्यावारिधि गरिसकेका छन् । उनले लगानी बोर्डमा समेत काम गरेका छन्् । पौडेलले संघीय अर्थ मन्त्रालयको आर्थिक नीति विश्लेषण महाशाखा प्रमुखको रूपमा चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा योगदान पुर्याएका थिए ।
गण्डकी प्रदेशमा दंगाल
गण्डकी प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको सचिवमा पदस्थापन भएका रामेश्वर दंगाल प्रशासन क्षेत्रका ज्ञाता मानिन्छन् । करिब ६ महिनाअगाडि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट भन्सार विभागको महानिर्देशक बन्न आएका दंगाल अहिले गण्डकी प्रदेश पुगेका हुन् ।
प्रदेश ५ मा मरासिनी
प्रदेश ५ को आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको सचिवमा पदस्थापन भएका मधुकुमार मरासिनीको अर्थक्षेत्रमा काम गरेको लामो अनुभव छ । अर्थ मन्त्रालयको राजस्व प्रशासन, बजेट र वैदेशिक महाशाखाजस्ता महत्वपूर्ण निकायको नेतृत्व गरिसकेका उनले न्यूयोर्कमा नेपाली कन्सुलेटको जिम्मेवारीसमेत बहन गरिसकेका छन् ।
कर्णाली प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको सचिवमा पदस्थापन भएका विष्णुप्रसाद नेपाल यसअघि अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत आन्तरिक राजस्व विभागको महानिर्देशक थिए । उनी राजस्व प्रशासनसँग लामो समयदेखि आवद्ध छन् । उनीसँग अर्थ मन्त्रालयको राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा, राष्ट्रिय योजना आयोगजस्ता महत्त्वपूर्ण निकायमा समेत काम गरिसकेका छन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको सचिवमा पदस्थापन भएका सुमनराज अर्याल यसअघि केन्द्रीय तथ्यांक विभागको महानिर्देशक थिए । उनी तथ्यांक र आर्थिक परिसूचक निर्माणमा विशेष दख्खल राख्छन् । तथ्यांक विभागका महानिर्देशकलाई अन्य मन्त्रालयमा सरुवा गर्ने प्रचलन नभए पनि अर्याल भने सचिव हुनकै लागि प्रदेश गएका हुन् ।
प्रकाशित मिति: आइतबार, भदौ २२, २०७६, २३:५०:००
एमसीसी संसदबाट पारिन नहुँदासम्म एमसीएका काम रोक्ने नेकपाको निर्णय